Ungazithola Kanjani Iziteshi Ezintsha Zokumaketha | Martech Zone
Ungazithola Kanjani Iziteshi Ezintsha Zokumaketha
NgoLwesibili, Januwari 21, 2014 NgoLwesibili, Januwari 21, 2014 USavannah Marie
"Bekuyindawo epholile ngempela ukuchitha isikhathi kuze kube wonke umuntu uqala ukuya khona." Lesi yisikhalazo esivamile phakathi kwama-hipsters. Abathengisi babelana ngokukhungatheka kwabo; okusho ukuthi, uma ufaka igama elithi “cool” esikhundleni seligama elithi “cool”
Isiteshi esihle sokumaketha singalahlekelwa ukukhanya kwaso ngokuhamba kwesikhathi. Abakhangisi abasha banake kude nomlayezo wakho. Izindleko ezikhulayo zenza ukuthi ukutshalwa kwezimali kungabi nenzuzo encane. Abasebenzisi abajwayelekile bayadinwa futhi badlulele emadlelweni aluhlaza. Ukugcina imisebenzi yakho yokumaketha izuzisa, kwesinye isikhathi kufanele wenze okufanayo.
Ngenhlanhla, amathuba amasha wokukhangisa aqhamuka ngaso sonke isikhathi. Ngeke bonke babe ngabanqobi ngokuhamba kwesikhathi, kepha okuwukuphela kwendlela yokuthola ukubheja okuhle ukubabhekela iso. Nazi ezinye izinto ongazenza ukuthola iziteshi ezintsha zokumaketha futhi uvuselele ukuxuba kwakho kokumaketha.
I-Internet inkulu kakhulu kangangokuba akekho ongayithwebula yonke. Ithuluzi elihle le-web tracker lingakutshela ukuthi izivakashi ziza kanjani kusayithi lakho, kepha uzophinde ufune ukwazi ukuthi ziya kuphi lapho zihamba. Izivakashi zakho kungenzeka zivakashela amasayithi ongazi ngisho nawo okwamanje, ngakho-ke beka uhlelo lwakho ukulandelela indlela abaziphatha ngayo lapho bengakuvakasheli.
Njengoba ubuchwepheshe bamanje buhamba kuze kube manje, ungahle udinge ukuskena lolu lwazi ngendlela yakudala. Uma izivakashi zithumela izixhumanisi, hlola lawo masayithi. Thola ukuthi bathanda bani futhi balandela bani. Bheka izithombe zabo ku-Pinterest naku-Instagram. Inqubo engaphelele, kepha uzothola okungenani umbono ojwayelekile wokuthi ungaya kuphi, ikakhulukazi uma ulandela izivakashi zakho ezisebenza kakhulu.
Bheka Imithombo Yokuqukethwe
Amawebhusayithi amaningi amasha asevele enohlelo lokumaketha okuqukethwe, okusho ukuthi asevele elungiselele amabhulogi namavidiyo wawo ngokusesha okuyinhloko (okungenani, uma bekwenzile kahle). Ngokuzayo lapho usesha okuqukethwe okusha, hlola umthombo wokukhetha kwakho okuthandayo bese ungeza lawo masayithi ohlwini lwakho lweziteshi ezintsha ezingaba khona.
Ukusheshisa inqubo, gxila kwimithombo ethumela okuqukethwe okuhle ngokungaguquguquki. Qala ukuxhumanisa lokhu okuqukethwe kusuka kuwebhusayithi yakho, futhi ngokuhamba kwesikhathi ungakwazi ukucela isayithi ukuthi libuyisele umusa. Futhi, linganisa amazinga wokuchofoza kulezi zixhumanisi. Amasayithi aheha izivakashi zakho eziningi angaba yindawo evundile yamathemba amasha.
Ukuze wenze umsebenzi wakho kahle, kufanele wazi ukuthi kwenzekani emhlabeni, nokuthi yiziphi izitayela ezintsha nezinto ezintsha ezisehlela ngomgwaqo. Abezindaba bayindawo enhle yokuthola zombili. Hlola inhlanganisela yamaphephandaba, amasayithi enzalo ejwayelekile nokushicilelwa kwemboni ukuthola izindlela ezintsha, abadlali abasha namathuba amasha wokumaketha.
Yenza okujwayele ukukwenza - skena izihloko zezindaba bese uyayeka lapho okuthile kudonsa iso lakho. Umehluko kuphela ukuthi uskena ngenhloso ehlukile. Esikhundleni sokuthola nje ukuthi yini okusha, hlaziya indaba ngayinye ukuthola ukuthi ushintsho luzolithinta yini isu lakho lokumaketha. Uma lokhu kuthatha isikhathi eside kakhulu, bhalisela ukuphakelwa kwe-RSS bese uthumela izihloko zezindaba.
Vele Qala Ukubheka
Wake waba nesikhathi samahhala futhi waqala ukuphequlula yonke into engena ekhanda lakho? Kwabanye, le yindlela yokubulala isikhathi. Kwabanye, kuyindlela esheshayo yokuphendula umbuzo ophikisayo. Kuwe, kungaba yindlela yokuwela esiteshini esisha sokumaketha.
Thatha ihora noma ngaphezulu usuku ngalunye ukusesha kunoma yini, noma ngabe kusile noma akunangqondo kangakanani. Uma ufuna, ungaqala ngokubhala kwamahhala. Bhala phansi yonke imicabango edlula ekhanda lakho bese usesha noma yini oyibhalile. Olunye usesho ngeke lube lukhulu, kepha ngezinye izinsuku uzothola okuthile okuvuselela umbono wokuqukethwe, ongaphenduka ithuba lokwakha isixhumanisi.
Alukho uhlelo lokumaketha oluhlala luzuzisa ingunaphakade. Ungahlali nje phansi ujabulele imiphumela emihle; qhubeka ubheke iziteshi ezintsha zokumaketha futhi wakhe isu lokumaketha elingagugi.
Tags: ukukhulumisanaiziteshi zokumakethaukumaketha kweziteshi eziningiamanethiwekhi omphakathiUbuchwepheshe
USavannah Marie ungumbhali ozimele futhi othanda ukuthengisa online. Uyazifela ngokulandela i-SEO, ukumaketha oku-inthanethi nezitayela zenhlalo. Mlandele Twitter futhi I-Google +.
Amamethrikhi Wokumaketha Anendaba